Mpamatsy vokatra vita amin'ny nify Whiten | China Teeth Whiten vokatra Mpanamboatra
tsy misy peroxide hp na fonosana gel gony miaraka amin'ny syringe
Ity maodely ity dia kitapo manadio nify matihanina ho an'ny salon na ho an'ny tobim-pitsaboana nify, manana hp, cp na peroxide tsy fidinao izahay, manohana ny serivisy famantarana marika oem izahay, mitady mpaninjara izahay, raha mahaliana anao izany dia andefaso ny fangatahana izahay, hamaly izany izahay.
ambongadiny kitapo famafana nify avo lenta amin'ny penina
Kitapo manadio nify maodely ity no matihanina amidy indrindra amin'ny famotsiana nify salon, misy penina mandoko nify ao anatiny, ho mora kokoa ny mampiditra ny gel mandoko nify, manohana ny serivisy oem izahay. Azonay atao ny manampy ny marikao amin'ny fonosana.
fanaraha-maso sensor 60w 12pcs jiro nify whitening machine
Ity milina fanadiovana nify maodely ity no ilay mahery indrindra, 60w, bolam-bolo namboarina 12 pcs, fanaraha-maso ny bokotra fanaraha-maso, fomba fijery lafo vidy, milina fanadiovana nify avo lenta, mitady mpiasa izahay, raha liana ianao, andefaso ny fangatahana aminay .
milina mahafotsy ny nify TE120 misy karatra na tsy misy
Ity milina fotsy ity dia malaza be mandritra ny taona maro. manana jiro kely 12 pcs ao anaty lohany izy io ary afaka mampiasa karatra RF IC, na tsy misy karatra RF IC raha tsy ilainao izany.
Masinina manadio nify taratra miaraka amin'ny efijery mikasika
Ity milina fanapahana nify maodely ity dia namboarina tamin'ny efijery mikasika, ary afaka miaraka amin'ny fakantsary, hanampy anao haka sary ny nify, ary haka ny fitsaboana alohan'ny sy aorian'ny fitsaboana fanamainana nify.
fivarotana mafana jiro nify manapotika nify
Ity milina fanadiovan'ny nify maodely ity dia ara-toekarena ary mahomby amin'ny fitsaboana manadio nify, miaraka amin'ny hazavana namboarina 8pcs, manohana ny sary famantarana marika oem amin'ny masinina izahay, mitady mpizara.
Fitaovana fanadiovana nify mora amina tranga
Ity milina fanapahana nify maodely ity no fivarotana mafana indrindra, misy tranga finday izy io, azonao entina any amin'ny toerana rehetra hanaovana fitsaboana fanadiovana nify, ary ny endriny dia pratical sy tsotra, tongasoa handefa ny fangatahana hahazoana antsipiriany bebe kokoa.
borosio ny rantsan-tànana hamafa ny gel izay manafotsy
Ity vokatra maodely ity dia mamafa ny rantsan-tànana, azo antsoina koa hoe borosy am-bava, be mpampiasa amin'ny fitsaboana amin'ny fotsifotsy nify, lamba tsy tenona ny akora ao aminy, mora ny manadio nify alohan'ny famotsiana nify.
Milina polishing ho an'ny nify manapotsy
Ity milina kely maodely ity dia natao ho an'ny fahadiovana am-bava isan'andro, mahomby amin'ny fanesorana ireo tasy mafy loha amin'ny nify, afaka manatsara ny vava, ny fivarotana mafana ny milina poloney. Manohana ny serivisy oem izahay, miaraka amina marika marika.
Torolàlana alokaloka amin'ny famotsiana nify
Ny torolàlana alokaloka dia ny fampitahana alohan'ny sy aorian'ny valiny raha ny fitsaboana amin'ny fotsifotsy nify, dia azonao atao ny mahita hoe firy ny manaloka rehefa avy manafotsy ny nify. Mora ampiasaina izy io ary tsy maintsy mila orinasa manadio nify.
arina voanio vovoka manapotsitra arina volo fotsy
Ity vokatra ity dia fampiasana an-trano isan'andro vovon-tsakafo fanadiovan-nify isan'andro, ny fototr'izany dia ny arina voanio, azo antoka ary mandaitra, manohana ny oem izahay, manampy sary famantarana amin'ny vokatra.
fampiasana an-trano fofon-koditra nify famafana nify
Ity famafana nify ity dia natao ho an'ny fampiasana fikolokoloana nify isan'andro ho an'ny trano, azonao ampiasaina isan'andro, misy kitapo manadio nify 14 pcs ao anatiny, afaka manampy marika marika izahay, ampanjifaina ny fonosana.